IFixit yenza ukusikwa kwe-iPhone X entsha kwaye oku kuyothusa nangaphakathi | Iindaba zeGajethi
Kwakhona sinazo zonke iinkcukacha zokwahlulwa kwe-iFixit entsha ngemodeli ye-iPhone. Kule meko, isixhobo esidlula kwitafile ye-iFixit yi-iPhone X esandula ukukhutshwa, kunye akukho nkcukacha inye ebalekayo ngaphakathi kwesixhobo.
Kolu hlolisiso kubangelwa zizizathu ezibini ezibalulekileyo, awona manqaku aphezulu afunyenwe yimveliso aya kulungiswa kwimeko yokophuka kwescreen, ukusilela kwangaphakathi, utshintsho lwebhetri okanye okufanayo nokufumanisa izinto zangaphakathi ezingakhankanywa yinkampani kwinkcazo-ntetho yayo, ethi iphone ityala ihlala ibhetri okanye i-RAM.
Kwimiba yokufumana amanqaku, kukho izinto zokuqaqambisa kwaye kunjalo le iPhone X iphumelele i-6 ngaphandle kwe-10, Ku-1 inqaku ekufuneka likhangelwe. Oku kuthetha ukuba imodeli entsha ye-Apple intle kakhulu kwimicimbi yokulungisa yexesha elizayo, idlula kwiscreen okanye ukulungiswa kwebhetri kwaye isilele ukuphinda ingangeni manzi i-iPhone xa sele ilungisiwe okanye iintambo ezintle ezidibanisa izixhobo zangaphakathi kwaye ezenza kube nzima ukunqamla ukulungiswa. Ngamafutshane, u-6 kwaba-10 akalilo inqaku elibi, kodwa kungcono ungawophuli. phambili iglasi engasemva inolungiso olubi kakhulu kuba kunyanzelekile ukuba udibanise onke amacandelo angaphakathi ukuze ubenakho ukutshintsha endaweni yokuqhekeka.
Malunga ne-RAM kuba sele isaziwa ukuba ine-3GB kwaye ibhetri ikule meko kabini, Ewe, ibhetri ye-iPhone X iye yaba "ziibhetri" ze-iPhone entsha, kuba yongeza ezimbini ngohlobo lwe "L" ezenza ukuba ukuzimela kwayo kuhlale kulungile nangona inesikrini se-OLED kunye nezinye izinzwa inokunciphisa ubude bayo. Onke amacandelo anokufunyanwa kwifayile ye- iFixit iwebhusayithi esemthethweni. I-Apple ayishiyi nto ngethuba kwaye kule iPhone X yonke into ilinganiswa kwimilimitha ukuze ibe nakho konke ukusebenza kwaye kunokwenzeka ukuba kwenziwe ukulungiswa kwimeko yengxaki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » IFixit yenza ukusikwa kwe-iPhone X entsha kwaye oku kuyothusa nangaphakathi
Ezi ziimveliso kunye namaxabiso oza kuwafumana kwivenkile ekwi-Xiaomi ekwi-Intanethi eSpain